प्रकाशित: शुक्रबार, असोज २३, २०७७, २०:१२:०० नेपाल समय
विराटनगर- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ३२ औँ सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि १ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ९६ हजारको बजेट पारित गरेको छ।
विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत तर्फ ५० करोड ८८ लाख ३१ हजार बजेट पारित भएको छ। जुन कुल बजेटको ४३.९६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी सञ्चालन खर्चतर्फ ६४ करोड ८५ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जुन कुल बजेटको ५४.०४ प्रतिशत हो। विश्वविद्यालयको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.६० प्रतिशत घटेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको असर विश्वविद्यालयको बजेटमा पनि परेको बताइएको छ।
विश्वविद्यालयको ३२ औँ सभाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परीषदमा ३ जनालाई मनोनित गरेको छ। विश्वविद्यालयको डिनहरु मध्येबाट प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र डा.शैलेशमणि पोखरेल र शिक्षकहरु मध्येबाट डा.सन्देशदास श्रेष्ठलाई मनोनित गरेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने नीति ३२ औँ सभामा पेश गरेको छ।
विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षा तथा अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने नीति अनुरुप चालु आ.व.भित्र गोठगाउँ परिसरमा नमुना अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापनाका लागि डिपीआर सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता केन्द्रहरु सञ्चालनको तयारीका लागि वहुवर्षीय योजना ल्याइने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम उपकुलपति प्रा.डा. यादवराज कोइरालाले सभामा पेश गरे।
विश्वविद्यालय सभाले नेपाल सरकारबाट शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० मा भएको संसोधनका कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ (संशोधन सहित) को खण्ड (क) सांगठनिक तथा शैक्षिक नियमावली, खण्ड (ख) सेवासम्बन्धी नियमावली र खण्ड (ग) वित्तीय व्यवस्था नियमावली २०७४ (संशोधन सहित)मा संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
विश्वविद्यालय सभाले सुत्केरी विदा ९८ दिन बनाउने, २४ महिनाको तलव बराबरको ऋण दिन सकिने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ७ वटा आंगिक क्याम्पसहरुमा झण्डै २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवसायिक शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि १० प्रतिशत छात्रवृति प्रदान गर्दै आएको छ।
दसैंमा हुने आवतजावत रोक्न के छ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासनको तयारी ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम : रकम बाँडफाँड र योजना छनोटमा प्रत्यक्ष सांसदकै हात माथि